Izabelo ze-Semalt 10 Ukhangelele lula ukukhuphula i-SEO
Xa kuziwa ekuthetha ngokubonakala kwe-intanethi kunye injini yokukhangela ukuphuculwa, enye yezinto eziqhelekileyo eziza kwiingqondo zethu indlela yokwandisa amaphepha kunye nokusebenzisa izichazi zeemeta kunye namagama angundoqo kumxholo wethu . Kukho izicwangciso ezahlukeneyo kunye neendlela ozifunayo ukuze unakekele, kungakhathaliseki ukuba wenza kwiphepha le-SEO okanye iphepha le-SEO. I-intanethi yindawo enkulu kunye neetriliyoni zewebhsayithi, ngoko unako ukuzisa uphawu lwakho kwikhompyutheni ye-injini yokukhangela kuphela ukuba uyakwazi ukujolisa abaphulaphuli abafanelekileyo.
Nazi ezinye izinto ezikhawulezayo ezivela kuJason Adler, uMphathi weNtengiso kuMqhubi we-12 (Semalt , ukuphucula i-SEO ngokubanzi.
№1 Ukuphuculwa kweeNkcukacha zeNgingqi
Into yokuqala omele uyenze yenzelwa ukwandisa uluhlu lwakho lwendawo. Ukubambisana kubaluleke kakhulu kwiWebhu yeWebhu yehlabathi, kwaye kunokuba nzima ukuba abantu bachithe ixesha elide kwiwebhusayithi yakho. Yingakho kufanele uwatyelele ekubhekiselele kwiinkqubo ezicacileyo kunye ezimangalisayo kuphela. Uluhlu lwendawo luqulethwe nenombolo yefowuni, idilesi, i-ID ye-imeyili kunye nolunye ulwazi. Ngokukunika abathengi bakho, unokuqinisekisa ukuba basesandleni esiphephile kwaye ulungele ukuthatha imiyalelo yabo ngokungathandekiyo.
№2 Ukulawula iSifa sakho
Kubaluleke kakhulu ukulawula idumela lakho kwi-intanethi. Ngenxa yoko, kufuneka ugxininise ekufumaneni amanqaku amanqaku amahle, impendulo emihle kunye nokulinganiswa kwe-intanethi kunye nezibuyekezo ezizithethayo ngokwazo ngokusemthethweni nokuthembeka. Oku kuya kunika iinjongo zokukhangela ingcamango yendlela ethembekileyo kwaye igxininise ngayo malunga nebhizinisi lakho.
№3 rhoqo uhlaziya uluhlu lwegama eliphambili
Kufuneka uhlaziye uluhlu lwakho lwegama eliphambili rhoqo. Ukuba udala amanqaku amanqaku imihla ngemihla, kufuneka uqinisekise ukuba akukho magama angundoqo aphindaphindiweyo..Ngenye indlela, ungasetha ixesha leveki uze wenze uludwe lwamagama angundoqo ofuna ukujolisa kwiintsuku ezizayo.
№4 Musa ukugcina ii-SEO kwiziko lakho leenkampani
Iinkampani ezahlukeneyo zigcina i-SEO kwiindawo zabo zoshishino. Ukuba wenza okufanayo, makhe ndikuxelele ukuba wenza iphutha elikhulu. Kunoko, maxa wambi kufuneka uchithe kwiibhloko zamaphepha akho, iinkcazo, umxholo kunye nemifanekiso.
№5 Yenza isiqulatho somgangatho
Asikwazi ukungahoyili ukubaluleka kwamaphepha amanqaku kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo kwamagama angundoqo kuwo. Akudingeki ukuba ushicilele amanqaku amanqaku aphantsi rhoqo ngosuku. Kunoko, kufuneka ugxininise ekushicileleni izinto ezisemgangathweni kwaye ugcine ngokubonakalayo ukubonakala kwesiza sakho.
№6 Qhagamshelanisa iiWebhusayithi zakho kunye
Ukuba unamawebhusayithi amaninzi, kuya kuba kuhle ukudibanisa ndawonye. Ngenye yeendlela eziphambili ze-SEO, kwaye ezininzi iingcali zincoma kubathengi bazo.
№7 Sebenzisa amagama akho
Xa udala iikhonkco, kufuneka usebenzise amagama akho kwaye unqande ukuthembela kwamanye amaziko. Kufuneka uhlale usebenzisa itekisi ye-anchor kwaye unike izixhumanisi kumanqaku akho ahlukeneyo ukwenzela ukuba abasebenzisi abangaphezulu nabaninzi baxakeke.
№8 Musa ukulahla iSiteshi sakho se-YouTube
Ukuba ufuna ukufumana isikhundla esifanelekileyo kwimiphumo ye-injini yokukhangela, akufanele unakunaki isiteshi sakho se-YouTube uze udibane newebhusayithi yakho. Layisha iividiyo eziphezulu kwili khululo kwaye iGoogle ingabelana ngamanqaku akho ebhonasi kunye nesigaba esihle kakhulu. Shumaza amavidiyo akho ngqo kumanqaku akho ukutsala abantu abaninzi.
№9 Gcina iiNtlalo zakho zoLuntu
Enye yeendlela ezilula ukuphumelela kwi-intanethi yimihlali yoluntu ehlawulayo. Kufuneka usebenzise i-Facebook, i-Twitter, i-LinkedIn kunye ne-Google + rhoqo, ezona zizazona zixhobo ezixhamlayo zonxibelelwano.
№10 I-Mobile iyimfuneko ngo-2017
Kuyinyaniso ukuba izingosi ezinobungakanani bee-mobile ziyakwazi ukubandakanya iindwendwe ezininzi. Yenza isiza sakho siphendule kwaye i-Google ibe nobungane ukuze iphumelele iziphumo. I-Google inikezela ngeyona ndlela engcono kwiisayithi ezingabonwa kuzo zonke iindidi zezixhobo ngendlela engcono.